China Landscape Grass ye chaim DIY zvitoro fekitori uye vanotengesa | Wanhe
DIY nzvimbo uswa hwechitoro
Landscape Grass yechaim DIY zvitoro
Landscape Grass Yekutengesa
Landscape Grass yeGindu
Landscape Grass yeGorofu
Landscape Grass yenhandare
Mareferenzi eiyo Multi-Sport Grass
Zvinyorwa zveHockey Grass
Zvinyorwa zveRugby Grass
Zvinyorwa zveNhabvu Grass
Zvinyorwa zveLandscape Grass
Zvinyorwa zve chaim / DIY Zvitoro
Turf ndeye 100% anti-kuchembera uye UV
2.Turf base iri zvakare 100% anti-kuchembera uye UV
3.Ukuwanda, gauge, stitches chiyero chinogona kugadziriswa nezvinodiwa. Saka mutengo unogona zvakanyanya kana zvishoma.
4.Kukora uye upamhi hweiyo fiber / Yarn inogona kugadziriswa nezvinodiwa, Saka mutengo unogona kuve wakawanda kana kushoma.
5.Has yakakwirira kupfeka kuramba
6.Environmental hushamwari, haina chero inorema simbi.Harmless kune munhu ivhu uye pasi mvura.
7.Resisting tsvina, kupisa, kunofambira mberi magetsi uye ruzha etc.Easy Kuchenesa: Indoor kuchenesa pamwe Vacuum cleaner. Kunze kuchenesa chinja mvura yakachena.
8.Easy kuisa, nyore kugadzirisa
MOQ:500 mativi emamita
Nguva yokutora: inenge.Mazuva 15-25
OEM uye ODM Gamuchira; Mahara sampuli kutumira
Kushanda: Galleries, balconies, gadheni, matenga, kindergartens, zvikoro, zvivanze, nhandare, mota dzinoratidza, kuratidzira, kuratidza windows, kapeti, peteti, nhabvu nhandare, nezvimwe.
Yakakwira mhando PE zvinhu, kukwirira kusimba, kucheka kumucheto, kupfeka-kuramba, kutsika-kusagadzikana, kudzora moto, mvura-inokwenenzverwa, mhando yepamusoro, inokodzera nhandare yenhabvu, balconi, matare, corridors.
1. Mubvunzo: Ndeupi mhando yezvigadzirwa zvehuswa hwako hwekugadzira?
A: Uswa hwenzvimbo yemunda
Sports Grass yenhabvu, tenesi, gorofu, hockey zvichingodaro.
Yekutengesa huswa kapeti yekuratidzira
Chakagadzirwa huswa hwekushongedza padenga
Ruvara rwakatsvuka uye zvese zvekuisa zvishongedzo
2. Mubvunzo: Zvakadii nezvemvura inoyerera?
A: Hapana chikonzero chekushushikana pamusoro pemvura inoyerera. Huswa hwekugadzira hwazara zvakakwana uye mvura yemvura inodhira mairi sezvo huswa hwekugadzira hwakatsigirwa.
3. Mubvunzo: Huswa hwakagadzirwa hwakachengeteka kuvana nezvipfuyo here?
A: Kuomesa kuongororwa kunoitwa kuti vaone kuti havana zvinhu zvine njodzi zvichivaita vakachengeteka kuvana nezvipfuyo.
4. Q: Chii chinonzi MOQ?
A: Kana isu takagadzira Grass stock, iyo MOQ inogona kunge iri 100 mativi emamita. Kana isu tisina yeArtificial Grass stock, iyo MOQ inofanira kunge ingangoita mazana mashanu emamirimita.
5. Q: Ungasarudza sei huswa hwekugadzira?
A: Tinogona kukurudzira huswa hwakakodzera hwokugadzira zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi wedu. Uyezve, timu yedu yehunyanzvi ine kuenderana kugovera matarenda uye hunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji,
chigadzirwa chakasarudzika chinogona kugamuchirwa, icho chinogona kugutsa zvizere mhando dzakasiyana dzevanoda vatengi. Uye inosimbirira pakupa mhinduro dzakasarudzika dzevatengi, neese ezvesainzi ruzivo uye yakatsaurirwa sevhisi, ichiita basa rakanakira iwe.
6. Q: Usati waita iyo odha, ndinogona kushanyira fekitori yako?
A: Hongu, unogamuchirwa kushanyira fekitari yedu. Ndokumbira utizivise hurongwa hwako hwekufamba pamberi penguva. Tinogona kuronga kuzokutora kuhotera kana kuairport.
Zvadaro: Landscape Grass Yekutengesa-111
Chakagadzirwa Grass Uye Rock Landscaping
Landscaping Paint YeGrass
Yakareba Grass Yekugadzira Nzvimbo
Yemazuva Ano Grass Landscaping
Natural Grass Yenzvimbo Yenzvimbo
Yakareba Kushongedza Grass Landscaping
Huswa hweWild Landscaping
Wanhe Indasitiri uye Kutengesa Co, Ltd.
Bhora Turf Uswa, Kutevedzera Grass Carpet, Tsvina Yakagadzirwa, Astro Turf Nhandare Yemunda, Chakagadzirwa Gorofu Grass, Landscaping Grass Yenzvimbo Yenzvimbo,